Puntland oo joojisay howlo gargaar oo uu siday Markab laga leeyahay dalka Turkiga (Dhegeyso) – Radio Daljir
Puntland oo joojisay howlo gargaar oo uu siday Markab laga leeyahay dalka Turkiga (Dhegeyso)
Agoosto 11, 2013 12:31 b 0
Boosaso. Aug 10, 2013 – Dowladda Puntland ayaa dib u celisay Markab siday raashin deeq ah oo loo waday degmooyinka Isku-shuban, Galdogob iyo Taleex, Markabka oo laga lahaa dalka Turkiga ayaa waxaa raashinka saaran soo maamushay dowladda Soomaaliya.
War-saxaafadeed ay soo saartay Puntland maanta ayaa arintaasi lagu diiday, waxaana dib loo celiyey markabkaasi laga halaa Turkiga, iyadoo Puntland sheegtay in ?raashinkaasi in uu yahay mid lagu khal-khal gelinayo bulshada Puntland, isal markaasna laga leeyahay dano siyaasadeed.
Puntland warka ay soo saartay waxaa lagu muujiyey arimo badan oo uusan raashinkaani sharci u ahayn in Puntland laga qeybiyo, waxaana guddi wasiiro ah loo saaray arinta markabkaasi.
Waxaa xeebta Dekedda Bosaso soo gaaray Markab sida raashin mucaawino lagu sheegay oo laga soo diray magaalada Muqdisho laguna soo hagaajiyey Degmooyin? gaar ah oo ka tirsan gobollada Dowladda Puntland, kaasoo aan Dowladda Puntland? wax xiriir ah lagala soo samayn habayaraatee.
Arrintaan waxay Dowladda Puntland u magacawday Guddi Wasiiro ah inuu daraasad ka sameeyo go?aan-na ka gaaro. Guddigu markuu arkay Dukumentiga la socda? Markabkaas, markuu daraasadeeyey qaabka raashinka loo soo abaabulay soo? diristiisii, markuu xaqiiqsaday ula jeedooyinka iyo danaha siyaasadeed ee looga? danlahaa, markuu Guddigu qiimeeyey in Dowladda Federaalka aysan wax codsi ama? xiriir ah kala soo samayn Dowladda Puntland, wuxuu Guddigu go?aan ku gaaray in? Markabkaas iyo raashinka uu sido dib loogu cesho meeshuu ka yimid.
Waxaa caddaatay in raashinkaani uu qeyb ka yahay siyaasad jahwareersan oo? Dowladda Federaalka ay ka wado gudaha Soomaaliya, taasoo khilaafsan Dastuurka? Federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo jiritaanka iyo Dastuurka Puntland.
Guddigu waxay aad uga xun yihiin Qoraaladda khaldan isna burinaaya ee ka soo? baxay Xafiiska Hay?adda Bisha Cas ee Turkiga oo fadhigeedu yahay Muqdisho,? Hey?adaasoo qoraal ku wargelisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka inay sugto amaanka raashin lagu qeybiyo gudaha Puntland.
Dowladda Puntland waxay qoraal gaar ah u diraysaa Xafiiska Hay?adda Bisha Cas? ee Turkiga iyo Dowladda Turkiga si jawaab kaafi ah looga soo bixiyo xadgudubkaan? siyaasadeed oo ay Turkiga qeyb ka noqdeen.
Dhegeyso codka wasiirka warfaafinta Puntland Axmed sheikh Jaamac
Baahin: Sabti,10 AUG 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo